“ငြိမ်းချမ်းရေး” ဟူသညေ့်၀ါဟာရကိုကြားလိုက်သည်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အနှစ်သာရကို လူသားတိုင်း မည်သူမဆို လိုလားတောင်းတကြမှာမလွဲပေ။ မည်သူကမှ အကြမ်းဖက်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် အင်အားသုံးပြီး ပဠိပက္ခဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းမျိုး စစ်မက်မှုကိုလိုလားကြမှာမဟုတ် ဟုယုံကြည်ချက်မှာမှားလောက်ဖွယ်မရှိပေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်လိုလားတောင်းတနေတဲ့ သူတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိသေးတဲ့ဒေသ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ အခံစားရဆုံးနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပြည်သူလူထုတွေက တရှိုက်မတ်မတ်တောင်းဆိုဆန္ဒပြု လာကြတာ ရာစုထက်၀က်ကျော်ခဲ့ပြီဆိုတာကို သတိမူလျှင်သိမြင်နိုင်ပါသည်။
“တပ်မတော် အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်”၊ “တပ်မတော်သာအမိ တပ်မတော်သာအဖ”၊ “တပ်မတော်သည် ပြည်သူ့တပ်မတော်ဖြစ်သည်” စသည့်ဆောင်ပုဒ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ကြွေးကြော်လာပါတဲ့ ပြည်သူ့ချဉ်ဖက်တပ်မတော်၊ ဒီကြားထဲ ပြည်သူ့အာဏာကိုလုပြီး ဟိုဦးတည်ချက်ဒီဦးတည်ချက်တွေပါ ဆိုပြီးချမှတ်အော်ကြီးဟစ်ကျယ်လုပ်လာပြန်ပါသေးတယ်။
အစိုးရစစ်တပ် တပ်မ ၈၈ မှ နမ့်ခမ်းဒေသခံရွာသားများကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်
ဇွန်လ ၄ ၊၅ ရက်နေ့များတွင် နမ့်ခမ်းမြို.နယ် ပလောင်များ နေထိုင်သောရွာများဖြစ်သည်. နောင်အန်း ၊ ဖာလင် ၊ ဆိုင်တောင် ၊ မန်အောင် စသည်. ရွာလေးရွာမှ ရွာသားများကို TNLA သူလျှိုများဟု စွပ်စွဲပြီး ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်း နှင့် လမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်။
ကလေးငယ်လည်မျိုကို ဓားထောက် ခြိမ်းခြောက်ပြီး သျှမ်းပြည်တပ်မတော်များ ရှိရာနေရာကို မေးမြန်း
အစိုးရစစ်တပ် ခလရ ၅၂၄ တပ် ကွန်ဟိန်း တပ်ခွဲ ၃ မှ စစ်ကြောင်းများသည် နမ့်စန်မြို.နယ် ကျိန်းခမ်းအုပ်စု အတွင်း၌ လှုပ်ရှားသွားလာပြီး ကလေးငယ်များနှင့် အသက်ကြီးသူများ၏ လည်မျိုကို ဓားဖြင့်ထောက်ကာ ခြိမ်းခြောက်ပြီး သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ရှိရာနေရာ ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုနှင့် လမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်မှု။